Hupenyu Hwako Hutsva Pamavhiri: Kufambira Mberi
Kuvimba ne wiricheya inogona kuve nyaya kana tsaona kana chirwere zvikaitisa munhu kusagona kufamba asina rubatsiro rwekufamba. Pakutanga, kusangana nedambudziko rakakura kudaro kunogona kunge kwakaoma. Kana izvi zvikaitika iwe unofanirwa kugadzirisa mararamiro ako zvinoenderana.
Apo a wiricheya inogona kupa imwe nhanho yekusununguka kune vanhu vanobata ne kuremara, zvinogona kunetsa zvikuru kuita shanduko idzi nekukasira.
Iko kunogara kune chirevo chisina kunaka kana zvasvika kune mavhiripu, asi haifanire kunge iri chiitiko chisina kunaka kuti uve wiricheya mushandisi. Izvo zvese nezve maonero mukati memunhu chimiro chendangariro, uye rutsigiro rwemhuri neshamwari kuti vapedze kuburikidza nechikamu chekutanga che kushandisa a wiricheya nguva refu.
Kunzwa kwekushungurudzika, kusuruvara, uye kurambidzwa kunogona kuva zvidyiwa zvemunhu achangobva kudzidza kuti aizove kushandisa a wiricheya kweupenyu hwavo hwese. Yezve kuputsika kwemanzwiro, mushonga wakanakisa inzira yekutsigira yakatenderedza iye munhu.